अफगानिस्तान द्वन्द्: त्यो सम्झौता जसले दुई दशकपछि अमेरिकी फौजलाई फिर्ता पठायो - muktikhabar
न्यूयोर्क र वाशिङ्टनमा सन् २००१ मा सेप्टेम्बर ११ मा भएको हमलापछि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा फौजले तालिबानलाई काबुलबाट हटाइदिए। लगभग दुई दशकपछि अहिले फेरि उक्त इस्लामिक सशस्त्र समूह अफगानिस्तानको राजधानीमा फर्किएको छ।
अमेरिकाले तालिबानसँग किन सम्झौता गर्‍यो? वर्ल्ड ट्रेड टावर ध्वस्त भएको भोलिपल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले प्रतिज्ञा गरेका थिए, “यो लडाइँमा समय र सङ्कल्प लाग्नेछ तर त्यसबारे कुनै गल्ती हुनेछैन र हामी युद्ध जित्नेछौँ।”
वास्तविकतामा चाहिँ अमेरिका कहिल्यै तालिबानमाथि सैन्य विजयको नजिक पनि पुगेन। तथापि सेप्टेम्बर ११ को हमलामा जिम्मेवार अलकायदाका लडाकुलाई शरण दिएको उक्त समूह नेटोको हस्तक्षेपसँगै सहरी क्षेत्रबाट व्यापक रूपमा पछि धकेलियो।
तालिबानले पुन: सङ्गठित हुन लामो समय लगायो र सन् २००४ पछि उक्त समूह नयाँ अफगान सरकार र पश्चिमा फौजविरुद्ध विद्रोह सुरु गर्नसक्ने अवस्थामा थियो। बढ्दो हमलाहरूको प्रतिकार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले सन् २००९ मा नेटो सेनाको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरे।
सबैभन्दा धेरै नेटो फौज भएका बेला अफगानिस्तानमा त्यसको सङ्ख्या एक लाख ४० हजारसम्म पुगेको थियो। त्यसले फेरि एक पटक तालिबानलाई पछि धकेल्न त मद्दत गर्‍यो तर त्यसका असरहरू दीर्घकालीन थिए।
तालिबानद्वारा नियन्त्रणपछि अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ?
‘अफगानिस्तान निकै ठूलो र गम्भीर मानवीय सङ्कटमा’ उक्त द्वन्द्व अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध बन्यो। अफगान युद्धमा उसले करिब ९७८ बिलियन डलर खर्च गर्‍यो भने २,३०० को जीवन गुम्यो।
यो अमेरिकीबीच एकदमै अलोकप्रिय हुँदै गयो र उक्त युद्धको हिस्सेदार नबन्न दबाव बढ्दै गयो।
यद्यपि सन् २०१४ पछि औपचारिक रूपमा अमेरिकी सेनाहरू तालिम र सहयोगमा केन्द्रित हुँदा प्रतिवर्ष मारिने अमेरिकी सैनिकहरूको सङ्ख्यामा तुलनात्मक रूपमा कमी आयो।
सन् २०१९ मा अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनीले विगत पाँच वर्षमा ४५,००० अफगान सुरक्षाकर्मीले शाहदत प्राप्त गरेको बताएका थिए।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँग सम्झौता गर्ने वार्तालाई निकै तीव्र बनाए र सन् २०२० को फेब्रुअरीमा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
उनी त्यस वर्षको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको दौडमा थिए र उनी उक्त सम्झौताबारे कुरा गर्दा प्रसन्न हुन्थे।
सम्झौतामा अमेरिका बाँकी रहेका सेनालाई फिर्ता गर्न सहमत भएको छ।
तालिबानले चाहिँ अलकायदा वा अन्य अतिवादी समूहलाई उसले नियन्त्रण गरेको क्षेत्रमा सञ्चालन हुन नदिन सहमत भएको छ।
त्यसले बन्धक १,००० अफगान सुरक्षाकर्मीको बदलामा ५,००० तालिबान कैदीहरूलाई छाड्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ।
त्यस्तै तालिबानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने भनिएको छ। उक्त सम्झौतामा तालिबान र अमेरिका मात्र संलग्न थिए।
रहस्यमयी तालिबान प्रवक्ताले अन्ततः अनुहार देखाए
सत्ता कब्जापछि तालिबानको पहिलो पत्रकार सम्मेलन
त्यसमा तालिबानले पछि अफगान सरकारसँग देशलाई भविष्यमा कसले र कसरी शासन गर्ने भन्नेबारे समझदारी गर्ने योजना पनि राखिएको थियो।
अफगानिस्तानका सुरक्षाकर्मी तयार पार्न ८८.३२ बिलियन डलर खर्च भएको थियो।
त्यहाँ सिद्धान्तत: तीन लाख फौज थिए। वार्ता हुँदा ती सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिने भनिएको थियो। ट्रम्पले उक्त सम्झौतालाई “अद्भुत सम्झौता” भनेका थिए।
३ भदौ २०७८, बिहीवार १५:२५ बजे प्रकाशित
भक्तपुर एमालेको कार्यक्रममा ओलीका लागि विशेष कुर्सी